Cape Verde - Washington DC ugbu a na Cabo Verde Airlines
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Ndị njem nlegharị anya nke Africa » Cape Verde - Washington DC ugbu a na Cabo Verde Airlines
Ndị njem nlegharị anya nke Africa • Airlines • Airport • Na-agbasa News Travel • Akụkọ Cabo Verde na -agbasa • Akụkọ Ọchịchị • investments • News • Transportation • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • Akwụkwọ akụkọ USA • Akụkọ dị iche iche
Gbọ elu bidoro n’etiti Cabo Verde na US Isi Obodo Washington DC, mere na Sọnde a, Disemba 8, wee pụọ n’ọdụ ụgbọ elu Amílcar Cabral International, na Sal, n’elekere 09:30 nke ụtụtụ, wee rute na Dulles International Airport na 02:00 pm
Tupu ịhapụ, Jens Bjarnason, onye isi oche nke Cabo Verde Airlines, toro mbido njikọ nke isi obodo United States of America.
"Obi dị anyị ezigbo ụtọ ibido ụzọ ọhụrụ na Washington, DC", Jens Bjarnason, onye isi ndị isi nke Cabo Verde Airlines kwuru.
“Mpaghara National Isi Mpaghara nwere njikọ ụgbọ elu ikuku na Africa na mbụ, na-enye ụzọ ọhụrụ a ohere dị ukwuu maka ịga nke ọma.
Zọ a ga-arụ ọrụ ugboro atọ n'izu, na Sọnde, Wednesde, na Fraịde na-ahapụ Sal Island na Mọnde, Tọzdee na Satọdee site na Washington, DC
Flightsgbọ elu niile ga-ejikọ Sal Island, Cabo Verde ụgbọ elu mba ofesi site na ebe ọ ga-ekwe omume ịbanye na ebe ụgbọ elu ahụ na Cabo Verde, Brazil (Fortaleza, Recife na Salvador), Senegal (Dakar), Nigeria (Lagos), na Europe (Lisbon, Paris, Milan na Rome).
Na mgbakwunye na njikọ njikọ na Sal Island, usoro ihe omume nke Cabo Verde Airlines na-enye ndị njem ohere ịnọ ụbọchị 7 na Cabo Verde ma si otú ahụ chọpụta ahụmịhe dịgasị iche iche na agwaetiti ahụ na-enweghị ụgwọ ọzọ na tiketi ụgbọelu.
Njikọ ọhụrụ a na-achọ ime ka ọnụnọ ụlọ ọrụ ahụ sie ike na ahịa North America. N'oge na-adịbeghị anya, Cabo Verde Airlines kpebikwara ime ka njikọ ya na Boston sikwuo ike, na-akpọkwu oku kwa izu, nke ga-amalite ọrụ site na Disemba 14.
US dabeere Onye isi ahia nke ndi njem na Afrika kelere Cabo Verde ụgbọ elu ma kwupụta olileanya ya iso ụgbọelu rụọ ọrụ iji jikọọ Africa na njem nleta Africa.
Cabo Verde ụgbọ elu bụ ndokwa ụgbọelu ụgbọelu, na-arụ ọrụ mba ofesi na Sal's Amílcar Cabral International Airport. Kemgbe Nọvemba afọ 2009, Cabo Verde Airlines bụ onye otu na-arụsi ọrụ ike na International Air Transport Association (IATA). Companylọ ọrụ ahụ na-akwado nkwekọrịta njikwa ugbu a na Reykjavík dabeere na Loftleidir Icelandic, enyemaka nke Icelandair Group.